SPAIN – Page 4 – Garsoore Sports
Kooxda ka cayaarta La Ligaha dalka Spain ee Real Betis ayaa xiiseyneysa Saxiixa dambeedka middig ee kooxda Arsenal Hector Bellerin waxaana ay la yesheen wadahadalo ku aadan suurtagalnimada uu ugu dhaqaaqi karo, waa sida shabakadda…
Kooxda kubbada-cagta Liverpool ayaa lala xiriirinayaa inay u dhaqaaqdo cayaaryahanka khadka dhexe ee Atletico Madrid Saul Niguez xagaagan. Sida laga soo xigtay Majaladda Empire Of The Kop, Reds ayaa miisaameysa inay u dhaqaaqdo cayaaryahankan heerka…
Horumarka ay muujiyeen Frenkie de Jong iyo Pedri, xilli ciyaareedkii 2020-21 ugu yaraan wuxuu soo bandhigay rajo ah in mustaqbalka khadka dhexe ee Barcelona uu ku wajahanyahay meel wanaagsan. Kaddib bixitaankii Xavi Hernandez iyo Andres…
Kooxda kubbada-cagta ee Sevilla ee dalka Spain ayaa dejisay qiimo bilow ah oo u dhexeeya 65 ilaa 70 milyan oo ginni oo ay ku dooneyso daafaceeda aadka loo qiimeeyo ee Jules Kounde, iyadoo Manchester United,…
RASMI: Messi Oo Ogolaaday Inuu Heshiiska U Kordhiyo Barcelona
Lionel Messi ayaa qarka u saaran inuu iska indho tiro xiisaha kooxaha Manchester City iyo Paris Saint-Germain isagoo doorbidaya inuu sii dheereysto joogitaankiisa Barcelona. Warar la isla dhexmarayay saxaafadda ayaa soo jiitamayay muddo bilooyin ah…
RASMI: Real Madrid Oo Ancelotti U Magacaawday Shaqada Tababarenimo Ee Kooxda
Carlo Ancelotti ayaa ah tababaraha cusub ee Real Madrid kaddib markii uu Florentino Perez soo la dhacay tababaraha reer Italy oo dhowaan leylinayay kooxda Everton. Inkastoo Raul iyo Mauricio Pochettino ay ahaayeen tartamayaasha ugu cadcad,…
Ancelotti Oo Loo Magacaabayo Tababaraha Real Madrid Saacadaha Soo Aadan
Ugaarsiga Real Madrid ee tababare cusub ayaa durba umuuqda mid gabagabo ku dhow iyadoo tababaraha Everton Carlo Ancelotti la filayo in lagu dhawaaqo inuu yahay ninka cusub ee hoggaamin doona kooxda. Los Blancos ayaa suuqa…
“Barca waxaan xiiseeynayay ilaa 14 jirkeeygii” – Sergio Aguero
Weeraryahanka reer Argentina ayaa rajeynaya inuu garoonka Camp Nou kaga garab cayaaro superstar-ka ay isku xulka yihiin ee Lionel Messi kaddib markii uu kooxda Barca u saxiixay heshiis labo sano ah. Sergio Aguero ayaa sheegay…
Ancelotti:Ramos Iyo Bale Waxaan Doonayaa Inay Joogaan
Carlo Ancelotti ayaa doonaya inuu tababare u noqdo Sergio Ramos xilli ciyaareedka soo socda laakiin tababaraha cusub ee Real Madrid ayaa qirtay in mustaqbalka daafacan uu weli hawada ku jiro. Qandaraaska Ramos wuxuu dhacayaa maalmo…
Zidane: “Real Kalsooni Iguma Qabin, Siddaas Ayaan Uga Tagay”
Tababarihii hore ee Real Madrid Zinedine Zidane ayaa daboolka ka qaaday ka tegitaankiisa Santiago Bernabeu isagoo adeegsanaya warqad furan. 48 jirkaan reer France ayaa ku soo laabtay Santiago Bernabeu bishii Maarso 2019, isagoo keenay seddex…